Izingelwa yiPirates injini yoSuthu - Ilanga News
Home Ezemidlalo Izingelwa yiPirates injini yoSuthu
Kuthiwa uMakhaula usohlwini lwabadlali abagaqelwe yiBucs
LUNGASE lulahlekelwe wumdlali walo omqoka uSuthu, uMakhehleni Makaula okuvela ezithi uzingelwa yi-Orlando Pirates.
ASENGCUPHENI yokulahlekelwa ngomunye umdlali AmaZulu FC okuthiwa ufunwa phansi phezulu yizinkunzi zaseSoweto. ILANGA lithole ngomthombo walo ozinze eGauteng ukuthi i-Orlando Pirates ifuna uthuli uMakhehleni Makhaula (32) oyinjini ophinde abe ngukaputeni wamaZulu. UMakhaula ufike oSuthwini kumasizini amabili edlule esuka kwiHighlands Park edayiselwe uTim Sukazi wayishintsha wayibiza ngeTS Galaxy. Selokhu efike oSuthwini ugila izimanga kangangoba ube nesandla ekutheni le kilabhu isonge isizini isendaweni yesibili kwi log.
Ube eseqokwa njengomdlali ovelele wasesiswini ngesizini ephelile. Leli phephandaba lithole ukuthi uMakhaula usohlwini lwabadlali iBucs efuna ukuqinisa ngabo isikwati sayo ngesizini ezayo. Kuvela izindaba zikaMakhaula nje, uSuthu lusanda kuhlwithwa uSiyethemba Sithebe odlala esiswini okuvela ukuthi usayine inkontileka yesibambiso neKaizer Chiefs. “Uma AmaZulu ezodlala kancane bazowaqothula abadlali bawo abamqoka. “Kuqale ngoSibusiso Mabiliso ohambe mahhala ejoyina iChiefs.
“NguSithebe manje naye ozohamba mahhala uma kuphela isizini. “UMakhaula naye kuthiwa iPirates isezithendeni zakhe iyamfuna. “Kodwake kuzocaca kahle ngokuphela kwesizini ukuthi kwenzakalani,” kusho umthombo waleli phephandaba. Leli phephandaba lishayela uSizwe Ntshangase ongumphathi kaMakhaula ngalolu daba uthe iPirates ibingakaze imthinte. Ube esekugcizelela ukuthi uma kukhona ikilabhu emfunayo kuyofanele ithinte uSuthu ngoba usanenkontileka nale kilabhu esalelwe ngenye isizini egcwele. Imizamo yokuthola uIrvin Khoza ongusihlalo weBucs ukuba aphawula ngalolu daba iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala kodwa lungabanjwa.
Previous articleIndlobane kowesifazane oshelwe yizingane (4) zafa ‘eyophuza’
Next articleIzwi likaWinnie Mahlangu lanika abesifazane izwi kuleli